हेल्थ टिप्स् : दाँतलाई सधैँ स्वस्थ राख्न अपनाउनुहोस् यी ७ टिप्स् « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
२८ श्रावण २०७६, मंगलवार १५:५३
अनुहारको मुस्कानलाई बरकरार राख्न दाँतले मद्दत गर्छ । त्यति मात्र हैन स्वस्थ दाँतका कारण यसले स्वस्थ जीवनमा पनि ठूलो साथ दिन्छ । तर मानिसको मुस्कुराहटलाई सम्हाल्ने दाँतको सुरक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनेको टूथब्रस हो ।
टूथब्रसले हाम्रो दाँतको सम्पूर्ण सफाइ गर्ने गर्छ । यसले हाम्रो दाँतमा जमेर रहेको खानाका अंशहरु तथा अन्य फोहर पदार्थ हटाउने काम गर्छ । तसर्थ हामीले सही टूथब्रसको चुनाव गर्नुपर्छ । त्यतिमात्र हैन हामीले त्यसको सरसफाइमा पनि ध्यान दिन अत्यन्त आवश्यक छ ।
जब हामी दाँत सफा गर्न ब्रस मुखमा छिराउछौँ , हाम्रो मुखभित्र रहेका हजारौँ लाखौँ ब्याक्टेरियाहरु हाम्रो ब्रसका माध्यमले बाहिर आउँछन । तर यदि ब्रसको सफाई गरिएन भने वा सफाई गर्न जानिएन भने ब्रसमै डेरा जमाएका व्याक्टेरियाहरुले पुन तपाईँको मुखमा प्रबेश गर्दछन् । त्यसैले ब्रसको सफाईमा ध्यान पुरयाउनु अतिनै आवश्यक छ ।
५. घरका सदस्यहरुको ब्रस एकआपसमा जोड्न नदिनुस् जसले गर्दा एक ब्रसमा भएको ब्याक्टेरिया अर्को ब्रसमा लाग्न पाउँदैन ।
७. तपाईँले प्रयोग गर्ने ब्रस हरेक ३-४ महिनामा परिबर्तन गर्न जरुरी हुन्छ र यदी ब्रसको सफा गर्ने माथिलो भाग चाडै खराब भयो भने चाडै बदल्नुपर्छ । लामो समय राख्दा ब्रस आफै संक्रमणमा पर्छ भने सफा गर्ने भाग नै बिग्रिएको कारणले दाँतको राम्ररी सफा समेत हुदैन ।
प्रकाशित मिति: २८ श्रावण २०७६, मंगलवार १५:५३